2- Fehezina ny vola:
- Foanana ny MID, ary sahy miatrika ny Banque mondiale sy ny FMI, ka miroso amin'ny création monétaire na ny fahafahana mamorona ny vola, mila Banky malagasy anefa izany sy pitsopitsony maro, nefa manana Malagasy mahay izany isika.
- Dématérialisation de la monnaie, foanana na ahena farany izay kely ny fampiasana ny vola ravitaratasy fa soloina carte bleue avokoa sy banking money na ireny Mvola, orange Monney, airtel money ireny. Foana avy hatrany ny halatra, fanodikodinana, ny kolokolo, ny vaky trano, voasitona avy hatrany ny hetra. Tsy mila akory an'izany appareil enregistreur izany, fa tonga dia voasitona isaky ny mahalafo entana ny TVA sy ny hetra.
Foana ny mpivarotra tsy ara-dalàna, satria izay manana patente ihany no ahazo appareil de payement.
3- Mila mamokatra:
- Fambolem-bary, ny tanjona dia ny ahavelon-tena, tsy ampy 400 000 tonnes fotsiny ny vary vokaritsika raha 4 millions tonnes no filàna. Vao 2,5% ny velaran-tanintsika fotsiny no voavoly vary, ary 2 tonnes/ha fotsiny ny rendement. Mila miakatra 3 tonnes/ha fotsiny ary manitatra tany volena ho 5% fotsiny dia efa mahatratra 10 millions de tonne ny vokatra, efa mihoatra ny 7 milliards de $ ny vola vahiny miditra nefa vao vary fotsiny izay.
- Fambolena sy fiompiana isan-karazany
- Asa tanana
4- Fanavaozana tanteraka ny foto-drafitr'asa:
- Ny làlana
- Ny sekoly, ny Université, ny tranon'ny mpianatra, ny cantine sy transport scolaire
- Poste avancé gendarmerie
- Ny barrage sy ny fifehezana ny rano
5 - Ny angovo:
- Fifehezana ny solika
- Fananganana ny famokarana jiro sy rano
- Fametrahana ny fampiasana tanteraka ny angovo azo avaozina, toy ny herin'ny rano, ny masoandro, ny rivotra, ny biogaz, ny ethanol ho solon'ny charbon ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iaianana, ambolena ny hazo fihinam-boho sy ny voakazo...
6 - Fametrahana ny fiarovana ny tany sy ny harenan'ny Malagasy:
- Ny fandriampahalemana, fanafoanana sy famaizana izay henjana ho an'ny miaramila na polisy manao kolokolo.
- Famatsiana ara-pitaovana toy ny hellico, F16 na Mig na Mirage, bateau rapide ny tafika hiandry ny sisi-tany, sy hitakiana ny Iles éparses (Sambo bois de rose iray dia mahazo MIG iray, nefa isika, efa namoaka 2000 conteneurs bois de rose, taona vitsy izay.)
7- Fampianarana sy Fanofanana ary famoronana asa.
- Asa 1 millions avy hatrany dia azo foronina, averina ny service civique na service national ho an'ny rehetra. Ireo mpianatra nivoaka fianarana rehetra nanao engagement decenal izay miisa 10 000 isan-taona, izany hoe efa 100 000 licenciés amin'izao raha ny 10 taona lasa ihany no alaina, dia alefa sy zaraina isam-pokotany, misy 5 isam-pokotany avy manao ny fanentanana sy ny asa fampandrosoana rehetra isam-pokotany.
Ampamakiana vato amin'ny dynamite ny tafika, dia atao pavé daholo ireny lalan-tsarotra sy lalana madinika ireny, velomina ny lakan-drano famokarana isan-tokony.
8 - Grand projet:
- Autoroute manodidina ny nosy sy mamaky azy avy any avaratra hatrany atsimo ary avy any andrefana miatsinana ka mampitohy ireo faritra mpamokatra voly sy fiompiana, indostria, mine ary tourisme.
- Production éléctrique
- Exploitation minière, akarina 20-40% ny redevance minière ny compagnie vaventy fa tsy ajanona 2%.
- Ny mpitrandraka madinika, jerena ny tany sy ny guichet unique hamarotany ny vokatra azony.
9 - Tourisme na fizahantany
- Fananganana sy fanatsarana ny fotodrafitr'asa fandraisam-bahiny
- Fanofanana tanora mba ho professionel, fianarana langue maro
- Amoraina ny saram-piaramanidina amin'ny alalan'ny fampidinana ny hetra izay efa 40% ny saran'ny fitaterana, ny taratasy ilaina, ny visa.
- Sokafana amin'ny Malagasy ny famatsiam-bolan'ny orin'asa Air Madagasikara, avaozina tanteraka ary omena ny Malagasy ny fitantanana azy. Tsy hitsabahan'ny mpanao politika, fa ny mpiasa matihanina no mitantana azy.
10 - Ny Fitantanana sy ny politika
- Ahato daholo ny resaka antoko, mifantoka amin'ny fampandrosoana miaraka avokoa ny rehetra.
- Asaina averin'ireo voaporofo fa nangalatra teto amin'ny firenena ny vola voaporofo fa naodina sy nangalarina, izay ambiny fananany no alaina raha toa ka efa laniny, tsy misy ny fanagadrana na sesitany raha tsy mamaly hanonotra izy. Tsy avela handray anjara amin'ny raharaham-pirenena intsony kosa izay voaporofo fa nangalatra teto amin'ny Firenena. Atao ny fampihavanana fa tsy fiaraha-mitantana akory.
- Diovina ny rafi-pitsarana, fehezina ny kolokolo ary averina ny fitokisan'ny vahoaka azy.
- Malalaka ny fanehoan-kevitra, ny haino aman-jery, ny fivoriana sy famoriam-bahoaka ankalaman-jana, ny filaharam-be fanehoan-kevitra, ny polisy mihitsy no mitarika manokatra ny lalana arak'izay efa nifanarahana mialoha.
- Foanana ny Pin Pan afatsy fotoana voatokana.
- Samy mahazo karama tsara sy indeminité ny mpitondra fa tsy misy mahazo fiara na mpiasa na trano na garde du corps, samy miantoka ny azy arak'izay tiany. Foanana ny chèque carburant.
- Atao ny fanisana ny mponina amin'ny alalan'ny biometrie, ny mpiasam-panjakana fantome ho foana.
- Informatiser-na ny administration, foana ny kolokolo, na mba voafehy.
11 - Omena ny faritra ny fahefana ahafahany mitantana ny harena sy ny fampadrosoana ao aminy.
12 - Apetraka ny tena fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena, izay vahiny mitsivalana amin'izany na mitsabaka ny raharaha tokatranon'ny Malagasy dia mody avy hatrany.
13 - Ireo rehetra manana ray na reny Malagasy, na raibe na renibe, tsy voatery izy roa, dia omena ny fizakana tanteraka ny maha Malagasy.
Ireo rehetra niaina teto Madagasikara talohan'ny 1960, dia omena ny fizakan-tena maha Malagasy, na tsy fantatra aza ny Ray amandreniny, mahazo ihany koa ireo zanany.
Ireo rehetra teraka teto Madagasikara dia mizaka ny maha Malagasy tanteraka na teraka oviana na teraka oviana.
Tsy atao fepetra amin'ny fizakan-tena Zo maha Malagasy ny anarana lazaina fa tsy teny Malagasy.
Mizaka ny Zom-pirenena Malagasy ihany koa ireo izay manambady Malagasy, Zo ara-panambadiana (misy fepetra)
Afaka mangataka ihany koa ny Zo maha Malagasy ny vahiny iray sy ny fianakaviany (misy fepetra)
Mila mihavana amin'ny tantara isika Malagasy, izay Firenena avy amin'ireo mpihavy avokoa, ary Firenena fatram-pandray ny hafa.
Tsy ekena kosa na izany aza ny fitokatokanana ara-pihaviana ka manilika ny hafa.
14 - Ny Tany no anisan'ny maha Malagasy ny Malagasy, ny tsirairay tsy misy ankanavaka dia tokony hanana tany ho azy, izay ho lovain'ny fara mandimby, tsy azo amidy, tsy azo zaraina.